လမင်းရဲ့ချိုသာတဲ့ လက်ခုပ်သံ – Pann Satt Lann Books
ယခုစာအုပ်သည် ဆရာညီပုလေး အင်းစိန်ထောင်တွင်ရှိနေစဉ်က ခင်မင်ခဲ့သည့် သူငယ်ချင်း ဇွန်မိုးအကြောင်းကို ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်တွင်း အားလပ်ချိန်များ၊ နားချိန်များ နှင့် အိပ်ချိန်များတွင် အိပ်ဆောင်အပြင်ဘက်တွင် စုပြီး ပြောပြခဲ့သည့် ဘဝဇာတ်ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့နှလုံးသားကို ဂီတသံတွေက တဆင့် ကြားနိုင်မယ့် စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
5.3 x 0.3 x 8.2 inches
စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ၊ 2019 ဇွန်လ၊ (တ-ကြိမ်)
လမင်းရဲ့ချိုသာတဲ့ လက်ခုပ်သံ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု4ရှိပါသည်။
Khin Myo Myat – September 6, 2020
ကိုယ့်အတွက်တော့ ကြည်နူးမှုကို အပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်လေး?
စာထဲပါတဲ့ ဂီတသံတွေ သီချင်းတွေကို ကိုယ်လက်လှမ်းမီသလောက် ရှာဖွေနားထောင်ဖြစ်တယ်
တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ ဇွန်မိုးရဲ့ အပျော်တွေ ကိုယ့်ဆီ ကူးစက်လာတယ်(ဂီတအကြောင်း ဂစ်တာအကြောင်း သီချင်းနားထောင်ရုံက လွဲပြီး ဘာမှ မသိတဲ့ ကိုယ်က ဇွန်မိုး ကလပ်ဇစ်ဂစ်တာသံကို စမြည်းစမ်းတဲ့ အချိန်၊ ရွှေကြိုးကြာကျွန်းစိုက်ခင်းမှာ မှော်ဝင်သလို ဂစ်တာတီးမိတယ်ဆိုတဲ့ လသာသာည၊ ကလပ်ဇစ်ကယ် ဂစ်တာတစ်လက် သူ့လက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တွေမှာ ဇွန်မိုးနဲ့ ထပ်တူနီးပါး ပျော်မိတယ်)
ည၁၀နာရီဝန်းကျင်လောက် ဆိုက်ကားသိမ်းပြန်လာတဲ့ ဆိုက်ကားဆရာကြီးရဲ့ လေချွန်သံကိုလည်း စိတ်မှန်းနဲ့ လွမ်းရတယ်(နားထောင်ဖူးချင်လိုက်တာဆိုတာ)
အထူးသဖြင့်တော့ ဇွန်မိုးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကို လေးစားချစ်ခင်မိတယ်(ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ ခံစားရလို့?)
ကိုယ်ပြောတာထက်ကို ပိုပြီး ဖတ်ရကြိုးနပ်လွန်းပါတယ်၊ စိတ်ကြည်နူးမှု ငြိမ်းချမ်းမှုကို ပြန်ရှာဖွေဖို့ လိုနေတဲ့ အခါမျိုးမှာ ထပ်ဖတ်ဖြစ်ဦးမှာပါ♡☆♡
ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ပြီး အဖိုးတန်လွန်းတဲ့အရသာကို ခံစားကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်
Ye Yint Hein – November 21, 2020
ညီပုလေး – လမင်းရဲ့ချိုသာတဲ့လက်ခုပ်သံ
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ကိုယ့်ကို တစ်ထိုင်တည်းနဲ့အပြီးဖတ်ချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးဆိုမမှားဘူး။ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ စာဖတ်သက်တမ်းကလည်း နည်းသေးတာလည်း ပါမှာပါ။ စာအုပ်လေးက မျက်နှာဖုံးက ပန်းချီလေးအတိုင်း ဂစ်တာဝါသနာအိုး တွေအကြိုက်တွေ့မှာ ကျိန်းသေပါတယ်။ ဒီလိုစာအုပ်လေးကို အခုလိုမျိုးအချိန် မနက်၇နာရီခွဲလောက် ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ဖြစ် ၀ရန်တာဖြစ်ဖြစ် တစ်နေရာရာမှာ ထိုင်ပြီး ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့သာ ထိုင်ဖတ်မယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ်??
ကဲအခုတော့ စာအုပ် reviewဘက်ကို သွားရအောင်။ဂစ်တာတီးနေရရင်ကျေနပ်‌တဲ့ ဇွန်မိုးဆိုတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားလေးရဲ့ အနုပညာအပေါ်တန်ဖိုးထားမှုကို ရေးပြထားတယ်။ဒီလို ဆိုပြီး အရမ်းရိုးရှင်းတယ်လို့ထင်နေရင်မှားသွားပြီ။
စာရေးဆရာ အနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို မိသားစုအချစ်၊ သူငယ်ချင်း အချစ်၊ အနုပညာကို ချစ်တဲ့အချစ်၊ သဘာ၀တရားကြီး အပေါ်ထားတဲ့အချစ် စတဲ့ရသမျိုးစုံကို ဟာသလေးတွေနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ရေးဖွဲ့ထားပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင် ဒီစာအုပ်ကနေ ဂစ်တာတွေရဲ့သမိုင်း၊ classical guitarတွေရဲ့သမိုင်းနဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြောင်းပါ ဗဟုသုတအနေနဲ့လေ့လာလို့ရပါသေးတယ်။ဇာတ်ကောင် ဇွန်မိုးအနေနဲ့ သူဝါသနာပါရာအလုပ်ကို လုပ်တဲ့အချိန် အနားမှာအားပေးတဲ့ မိဘ၊သူငယ်ချင်း၊အသိုင်းအဝိုင်းမျိုးရှိနေတာ သူ့အတွက်တော်တော်ကံကောင်းခဲ့တာပါ။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ စာရေးဆရာက အနောက်ဘက်နားမှာ classical guitarနဲ့ဆိုင်တဲ့ အချက်တွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့နေရာအားလုံးမှာ
မြန်မာလိုပဲရေးသွားတာပါ ဥပမာ(ကလပ်ဇစ်ကယ်ဂစ်တာ၊ အော်ခက်စတြာ)။ဒါကလည်း ဆရာညီပုလေး စာအုပ်ကို ပထမဆုံးဖတ်မိတဲ့အချိန် သတိထားမိတာလေးကိုပြောတာပါ။
ဂီတက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံစားမှုတွေကို ပိုပြီးတော့ အသက်၀င်စေပါတယ်။ ပျော်ရွှင်သည်ဖြစ်စေ ၀မ်းနည်းသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့အနားမှာ ရှိနေတာ ဂီတပါပဲ။ဇာတ်ကောင် ဇွန်မိုးလိုပဲ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ဘ၀မှာ ကိုယ်ဝါသနာပါရာ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်အောင်မြင်မြင် လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း……..
Sabe – October 23, 2021
အရမ်းကိုဖတ်ရတာ အနှစ်သာရအပြည့်ပါပဲ။ ကိုယ်လည်းသူ့လိုမျိုးကြိုးစားချင်စိတ်တွေ၊ နောက် ကိုယ်အလေးထားချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေရဲ့ လက်ခုပ်သံကိုကြားနိုင်အောင်ကြိုးစားချင်စေပါတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ပကာသနမထားတဲ့ပုံစံလေးကိုအားကျမိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ခင်မင်မှုတွေက မယုံနိုင်စရာပါ။
Sai Khant Naung – December 4, 2021
အသေကောင်းတဲ့စာအုပ်ပါ။စကားပြောပုံစံနဲ့ကိုမှ ဆရာညီပုလေးကရဲ့ လက်ရာကြောင့်ပိုပြီး ပြောင်မြောက်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ အဲ့တာကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာကလည်း ဆရာပါပီယွန်ရဲ့
အညွန်းကြောင့်ပေါ့။ဖတ်လည်းပြီးရော Classical Guitar တီးချင်သွားတာနဲ့ ဂစ်တာကောက်ဝယ်ပြီး တီးနေပြီ။